Muuri News Network » Austria oo sheegtay in 3 Qof loo xiray meydad laga helay gaari Xamuul ah
Austria oo sheegtay in 3 Qof loo xiray meydad laga helay gaari Xamuul ah
Aug 28, 2015 - Comments off
Xukuumada Austria,ayaa sheegtay in seddex qof lagu xiray dalka Hungary,ka dib markii meydadka 71-ruux laga helay gaari xamuul ah oo la dayacay.
Saraakiil maanta oo jimco ah warbaahinta la hadlay,ayaa sheegay in meydadka la helay ay ka kooban yihiin 59-rag 8-Haween ah iyo afar caruur ah oo uu ku jiro canug yar oo da’diisa u dhaxeysa hal ilaa iyo Labo sano jir.
Booliska Ausria ayaa horay u sheegay in tirada dhimashada u dhaxeysay 20 ilaa iyo 50,laakiin Wasaarada arimaha gudaha dalkaasi ayaa goor danbe soo saartay in meydadka laga helay gaariga xamuul ee la dhigay wada dhinaceeda ay gaarayaan 71-ruux.
Afhayeenka u hadlay Booliska Austria ayaa sheegay in seddexda qof ee la xiray mid ka mid ah u yahay Bulgarian,kaasi oo la aaminsa n yahay inuu leedahay gaariga xamuulka ah ee laga dhex helay meydadka.
Sidoo kale,Saraakiil ka tirsan Booliska ayaa xusay in seddexda qof ee xiran ay mas’uul ka yihiin geeridan dadkaan iyo dadka Qaxootiga ee sida sharcidarada ah Yurub uga galaya.
Gaariga Xamuulka ah oo maalintii shalay la helay ayaa ku sii jeeday Austria,kana yimid dalka Hungry.
Dadkaan dhintay ayaa dhamaantooda lagu sheegay inay ahaayeen Qaxooti doonayay iney Yurub galaan.